Kooxda Liverpool oo si dhib leh kaga adkaatay Fullham misane qaab ku meel gaar ah ula wareegtay hogaanka horyaalka +Sawiro – Gool FM
Kooxda Liverpool oo si dhib leh kaga adkaatay Fullham misane qaab ku meel gaar ah ula wareegtay hogaanka horyaalka +Sawiro
Bashiir March 18, 2019
( Premier League ) 17 Marso 2019 Kooxda Liverpoo ayaa guul baxsad ah ka gaartay kooxda Fullham kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League , natiijada kulan ciyaareedka ayaana ku dhamaaday 2-1 oo ay ku adkaatay kooxda Liverpool .
Qeebti koowaad ee kulan ciyaareedka kooxda Liverpool ayaa soo bandhigatay qaab ciayreed cajiib ah iyaga oona la yimid gool , halka kooxda Fullham ay ku hun goobeen in ay iska soo bareejeeyaan goolka koowaad .
Reds ayaa ayaa heshay goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga rere Sinagal ee Mane kaddib markii uu caawin ka helay Roberto Firmino daqiiqadii 26-aad ee ciyaarta .
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa kud dhamaaday 1-0 oo ay ku hor kaceyso kooxda Liverpool , muddo kaddib waxaa dib loo anaba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo aheyd mid xiiso badan .
Kooxda Fullham oo ayaa la timid goolka bareejada qeebtii dambe ee ciyaarta waxaana goolkaas u dhaliyey Ryan Babel kaddib markii uu ka faaideysatay qalad ay sameyeen sedex xidig oo kooxda Liverpool ah .
Reds ayaa dadaal u gashay sidii ay ku heli lahayaan goolka labaad ee ciyaarta balse kooxda Fullham ayaa sameesay difaacasho qurux badan .
ugu dambeen Liverpool waxa aya heleen goolka labaad ee ciyaarta oo aheyd mid rigoore ah waxaana u dhaliyey Milner kaddib markii qalad lagu galay Sadio Mane.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka ayaa ku dhamaaday 2-1 oo ay ku adkaatay kooxda Liverpool waxa ayna si gumeel gaar ah ula waregeen hogaanka horyaalka madaama kulan ciyaareedkii City ee todoabaadkan la baajiyey .
Kooxda Genoa oo soo gaba gabeysay rikoorkii guulaha ee Juventus kaddib guul muhiim ah oo ay ka gaareen
Hankii Chelsea ee booska afaraad oo god mugdi sii galay kaddib guul daro ay kala kulantay kooxda Everton+Sawiro